★Firehouse Loft in NorthShore - Coca + unique
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguChristy And Avery
Ihlaziywe, i-CLEAN eyongezelelekileyo, indawo ephezulu yale mihla kwindlu yomlilo ka-1920. Iisilingi ezinyukayo, imigangatho yeeplanga, iindonga zezitena, iifestile ezinkulu - uninzi lwabantu! Uya kuhlala kanye apho abacimi-mlilo babehlala khona kwiminyaka eyi-100 eyadlulayo.
Ukufikelela ngokulula kuyo yonke into-indawo zokutyela eFrazier okanye eCherokee, kukutya okuPheleleyo, edolophini, ngasemlanjeni, i-aquarium, iipaki kunye neStringer's Ridge zonke zikumgama wokuhamba.
Iindwendwe zethu zithe: "Eyona ndawo ipholileyo kweli cala le-cosmos" kwaye "bendiziva ngathi ndihlala ngaphakathi kwebhodi yam yePinterest."
Iloft yabucala kumgangatho ophezulu wendlu enemigangatho emi-2 ehlaziyiweyo yezitena zomlilo.
*Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokungena ekuhlaleni! Unomnyango wakho kwaye awusoze uwubone umphefumlo. Kwaye, indawo ivakala ilungile kangangokuba uya konwaba ngokuzingela apha ezantsi. Ukuhamba umgama ukuya ePublix, ukutya okupheleleyo kunye neWalgreens. Iindawo zokutyela ezininzi zasekhaya zibonelela ngokuthatha kunye nokuhanjiswa. Ukufikelela ngokulula kwiindlela kunye nemisebenzi yangaphandle.
* Siyazingca ngokusoloko sikubonelela ngendawo ecocekileyo ukuze uzive ukhululekile kuhambo lwakho. Ngaphambi kokuba ufike, sicoca ngokucokisekileyo kwaye sibulale iintsholongwane. Oko kubandakanya yonke indawo ephezulu yokuchukumisa, njengamaqhosha engcango, izitshixo zokukhanya, iitafile, iiremote control, izibambo, iidesika, izindlu zangasese kunye neesinki. Sikwabonelela ngesepha ekumgangatho ophezulu kwisinki nganye yokuhlamba izandla rhoqo. Kwaye ewe, sinalo iphepha langasese :-).
Sibulala iintsholongwane nge-Force of Nature cleaner, evunywe yi-EPA kwi-coronavirus, kwaye yonke into yendalo, akukho vumba.
• 700 sf 1-igumbi lokulala/ibhafu enye
• Ishawari enkulu enemigangatho yamatye emilambo
• Iisilingi eziziimitha ezili-11 ubude zibonisa iinkuni ezibuyiselweyo
• Iindonga zezitena kunye nemigangatho emidala eyenziwe ngamaplanga = efudumeleyo, indawo yoshishino
• Indawo yomlilo yerhasi etshisiweyo ukuze uhlale ufudumele ebusika
• I-intanethi ye-FAST ye-Chattanooga + kutshanje iphucule inkqubo ye-wifi yendlu yonke
Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwakho kwezothando - iindwendwe zethu zihlala zilapha kwisikhumbuzo, imitshato, izindululo.
**Indawo ekulungeleyo kuyo nayiphi na iminyhadala emlanjeni okanye edolophini.**
-Igumbi lokulala (indawo yokulala 2) - igumbi lokulala elikhulu, eliqaqambileyo elineefestile ezi-2, ibhedi ye-queen yobukhulu be-foam, ikhabethe enkulu, i-shades yefestile emnyama, ukukhetha phantsi okanye i-foam pillows, i-100% ye-cotton sheets
-Igumbi lokuhlala (ilala 2) elinendawo yomlilo yegesi, iTV ecwebileyo, kunye nesofa evula ibhedi yeqonga lendlovukazi/ijeli (hayi indala, ibhedi yesofa engathandekiyo!)
Ikhitshi, i-oveni yokuphekela, i-oven ye-convection toaster, i-microwave, i-blendTec blender, umenzi wekofu, iimbiza, iipani, izitya, izitya, ikofu, iti, kunye nezinye izinto zokupheka ezisisiseko (ioyile, iviniga, iswekile, njl. njl. I-oven ye-toaster yokuhambisa.
- Indawo yokutyela - izihlalo ezine
-Igumbi lokuhlambela eligcweleyo-ishawari enkulu eneentloko zeshawa ezi-2 kunye nemigangatho yamatye omlambo
-I-Roku TV ikuvumela ukuba ubukele i-akhawunti yakho ye-Hulu, iNetflix, kunye ne-Amazon kwaye ibonelela ngeetshaneli ezininzi zasimahla, kodwa akukho ntambo.
- Siyakwamkela ukuzola, izinja eziziphethe kakuhle. Kukho iyadi encinci eyahlukileyo (ebiyelwe kumacala ama-3) yenjana yakho. Nceda usazise ukuba uza nenja.
-I-All-Clad yokupheka engenanto, i-ceramic skillet, kunye nezixhobo ze-OXO
- I-100% yamaphepha ekotoni kunye ne-memory foam umatrasi
- 100% iitawuli zomqhaphu
-Isofa yesikhumba yaseMelika enogwebu oluphuculweyo lwenkumbulo/umatrasi wejeli (ayiyobhedi endala enesagi enesofa embindini!)
-Ifenitshala evela eWest Elm kunye neCrate & Barrel
IMEKO YECHEMICAL EPHANTSI:
- akukho zihlambululi zomoya okanye izicoci ezirhabaxa
- akukho Teflon cookware
- ivumba- & nesicoci sempahla esingadayi
- abacoci bendalo kunye neeoli eziyimfuneko
Sihlala kwaye sisebenza ezantsi ngoko ke sifumaneka ngokulula ukuba unengxaki okanye ufuna nantoni na. Kwaye, ngenxa yokuba sihlala ezantsi, siyakucela ukuba uqaphele ukugcina ingxolo incinci (umzekelo - akukho mculo ungxola kakhulu), ngakumbi emva kwentsimbi yesithoba.
Abantu bayayithanda indlela ecoceke ngayo i-loft, indlela ehluke ngayo, kwaye isondele kangakanani kwizinto ezininzi. Kuba iyindawo yasedolophini, uya kuva iibhasi, abahambi ngeenyawo, kunye neesiren. Le yingingqi esenyukayo. Kukho umxube wezindlu ezintsha kraca, ezintle kunye nezinye izindlu eziwohlokileyo- olu asilulo uluntu olunesango! Zonke iindwendwe ziye zaphawula ukuba ziyithanda kangakanani indawo, kwaye siyayithanda, nathi.
4.98 ·Izimvo eziyi-697
4.98 out of 5 stars from 697 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-697
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi697
INorthShore yindawo entle ukuba ube kuyo kuba ikufutshane nayo yonke into. Uyakwazi ukubona iPublix ukusuka apha. Umlambo, edolophini, i-Aquarium, i-Whole Foods, iindawo zokutyela zendawo, imivalo, iivenkile zekofu zonke zingaphakathi kwemizuzu eyi-15 yokuhamba.
Ngokwenene ngamava asedolophini - ukufutshane kwaye isixeko siyaphithizela sikungqongileyo - iimoto, iibhasi, abantu abahambahambayo & nokukhwela ibhayisekile kuyo yonke indawo. Ngaphezu koko, unokuhamba uye kwi-trailhead ye-Stringer's Ridge-iikhilomitha ezili-10 zeendlela zokuhamba ngeenyawo kwindawo yokugcina idolophu eyi-92-acre.
Umbuki zindwendwe ngu- Christy And Avery
Sihlala kumgangatho osezantsi kwaye sisebenzela ekhaya, ke siya kuba malunga nayo nayiphi na imibuzo. Sizimisele ukusebenzisana okuninzi okanye okuncinci njengoko uthanda.
UChristy And Avery yi-Superhost